Tetika mahaliana 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Kindle | Vaovao momba ny gadget
Androany ny Amazon Kindle Izy ireo dia saika ireo eReaders malaza indrindra na boky elektronika eny an-tsena, noho ny endrik'izy ireo mihabe, ny toetra amam-panahiny, fa ambonin'izany rehetra izany ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia noho ny vidiny. Amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia misy fianakaviana lehibe misy fitaovana misy, azo zahana amin'ny mpampiasa rehetra ary miaraka amina karazana asa sy fika isan-karazany izay azonao safidiana arak'izay ilainao.
Raha manana Kindle Oasis ianao, Kindle Voyage, Kindle Paperwhite, Kindle fototra na koa iray amin'ireo Kindle hafa natombok'i Amazon teny an-tsena nandritra ny tantarany, anio dia hasehontsika anao Tetika mahaliana 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Kindle anao avy any Amazon, ary afaka mampiasa tsara amin'izany ianao, tsy hoe hamaky boky nomerika isan-karazany fotsiny.
1 Alefaso any amin'ny Kindle anao ny pejin-tranonkala
2 Mandefasa boky nomerika amin'ny Kindleo amin'ny alàlan'ny mailaka
3 Mampindrana boky nomerika ho an'izay tianao
4 Makà pikantsary amin'ny Kindle anao
5 Avereno ny kaontera sisa tavela ho an'ilay boky
Alefaso any amin'ny Kindle anao ny pejin-tranonkala
Hatramin'ny nividianako ny fitaovako Kindle, taona vitsy lasa izay, ny iray amin'ireo safidy tiako indrindra dia ny hery mandefasa pejin-tranonkala any amin'ny fitaovako Amazon, avy amin'ny finday avo lenta na avy amin'ny solo-sainako, hamaky aoriana.
Amin'ny fotoana maro mandritra ny andro dia mandefa lahatsoratra mahaliana ahy aho hamaky rehefa mandry eo amin'ny sofa aho isan'alina ary hahafahako mamaky teny tsara nefa tsy mamela ny masoko, ary ambonin'izany rehetra izany dia milamina ny saina.
Mba hahafahanao mampiasa an'io fikafika io, ny sisa apetrakao dia ny mametraka ny extension Alefaso any Kindle ao amin'ny tranokala Google Chrome anao. Mazava ho azy, mba hahafahanao mamaky ireo lahatsoratra nalefa tany amin'ny Kindle anao dia tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny tambajotran'ireo tambajotra izany ary ampifanaraho miaraka aminy mba hahazoany ny vaovao isan'andro.
Ampidino - Alefaso any Kindle
Mandefasa boky nomerika amin'ny Kindleo amin'ny alàlan'ny mailaka
Ny Amazon Kindle dia iray amin'ireo fitaovana vitsivitsy eny an-tsena izay tsy mampiasa ny endrika epub ho an'ny boky nomerika, misafidy hatrizay hatrizay ho an'ny AZQ. Izany dia mitaky fahasahiranana amin'ny fanovana ireo e-book amin'ny fotoana maro hahafahana mankafy azy ireo amin'ny fitaovantsika avy amin'ny orinasa tarihin'i Jeff Bezos.
Mba hanaovana izany dia misy safidy maro toa an'i Caliber, fa koa ny mety fandefasana boky na antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny mailaka anay manokana, ny fandraisana azy dia efa navadika ho endrika mifanaraka amin'ny Kindle misy antsika. Raha te-hanatanteraka an'ity fika ity ianao dia mila apetaho fotsiny ary alefaso any amin'ny adiresy mailaka nomen'ny Kindle tsirairay avy ary azonao jerena ao amin'ny fampahalalana momba ny fitaovanao na avy amin'ny tranokala Amazon, avy aiza ianao no mitantana ny fitaovana.
Mampindrana boky nomerika ho an'izay tianao
Raha nieritreritra ianao fa satria manana Kindle ianao dia tsy ho afaka hamela ny eBooks anao ho an'ny namana na olona ao amin'ny fianakaviana, ilay karazana izay tsy manome anao ireo boky na mamerina azy ireo aminao rehefa taona maro taorian'ny nampindrana anao ry zareo, diso be ianao. Ary izany ve avy amin'ny boky e-Amazon rehetra dia afaka mampindrana boky nomerika amin'ny namana na mpianakavy izahay, tsy misy olana, na dia tsy mora toy ny hoe boky miendrika endrika ara-batana aza izany.
Raha te hampindrana boky, dia tsy maintsy ampidirina anaty lisitra izay azon'ny Amazon ampiasain'ny mpampiasa rehetra ary ampidirina ao anatin'ny serivisy «Fampindram-bola azo ampiasana». Izay boky rehetra manana an'ity hafatra ity dia azo indramina mandritra ny roa herinandro ary tsy andoavam-bola tanteraka. Ny fampindramam-bola dia namboarina tamin'ny pejy Tantano ny Amazon Kindle-nao, izay ilazanao fotsiny ny manondro izay boky tianao hampindrana ary amin'izay tianao avela mandritra ny roa herinandro.
Amazon dia efa nanambara fa miasa amin'ny famindrana ny boky nomerika rehetra amin'ny namana na mpianakavy izy, na dia toa mbola lavitra aza ny fotoana tokony hitrangan'izany, farafaharatsiny amin'ny fomba ara-dalàna.
Makà pikantsary amin'ny Kindle anao
Iray amin'ireo tetika mahaliana indrindra azontsika amin'ny Kindle anay, ary tsy fantatry ny mpampiasa maro ny fahafahany maka pikantsary mamela antsika, ohatra, hitahiry pejy manokana amin'ny boky izay vakiantsika mandrakizay.
Miankina amin'ny dikantenin'ny Kindle izay ananantsika, ny pikantsary dia vita amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Amin'ny endrika famintinana etsy ambany dia asehonay anao ny ny fomba fakana pikantsary amin'ny kinova samihafa amin'ny Amazon eReader;
Kindle tany am-boalohany, Kindle 2, Kindle DX, ary Kindle miaraka amin'ny klavier: haka ny pikantsary dia tsy maintsy tazomintsika ny kitendry Alt-Shift-G
Kindle 4: tsindrio ary tazomy miaraka ny bokotra an-trano sy ny bokotra fitendry
Touch Kindle: aloha tsy maintsy tazomintsika ny bokotra fanombohana ary avy eo kitiho ny efijery hahazoana sary iray amin'ny efijery
Kindle Paperwhite, Kindle (2014): tsy manana bokotra ara-batana ireo fitaovana roa ireo ka voatery nieritreritra fomba hafa i Amazon mba haka pikantsary. Raha mila sarin'izay hitantsika eo amin'ny efijery isika dia ho ampy ny manindry ny zoro mifanohitra roa amin'ny efijery
Voyage Kindle: afaka maka pikantsary toy ny ao amin'ny Paperwhite isika amin'ny fikitihana ny lafiny roa mifanohitra amin'ny efijery
Kindle Oasis: ny pikantsary dia raisina toy ny amin'ny Voyage amin'ny alàlan'ny fanoratana ny zoro roa mifanohitra amin'ny efijery amin'ny fotoana iray
Avereno ny kaontera sisa tavela ho an'ilay boky
Iray amin'ireo tombony lehibe atolotry ny ankamaroan'ny boky elektronika eny an-tsena, ao anatin'izany ny Kindle, ny azo atao ny mahita amin'ny fotoana rehetra ary eo am-pamakiana isika, ny ora sy ny pejy ilaintsika hamita ilay boky. Ny fampisehoana ireo pejy ilaintsika hamita ilay boky dia tsy zavatra sarotra loatra amin'ny fitaovana rehetra, fa ny fanaovana kajy ny fotoana ilaintsika hamita azy dia zavatra tsy dia kely loatra.
Ny Kindle hanehoana antsika amin'ity indray mitoraka ity dia mifototra amin'ny hafainganan'ny famakiana sy amin'ny algorithma sasany izay saika tsy misy mahatakatra afa-tsy ny maka sary an-tsaina ilay mpamorona Amazon hafahafa. Mampalahelo fa tsy mandeha tsara koa izy io matetika amin'ny ebook sasany, indrindra ireo novidiana tany ivelan'i Amazon.
Soa ihany fa tsy olana be loatra ny mamerina ity kaonty ity amin'ny fotoana sisa tavela mba hahatratra ny faran'ny boky. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy sokafantsika ny motera fikarohana an'ny Kindle fa raha mbola tsy nampiasanao dia eo an-tampon'ny efijery izany, ary soraty "; ReadingTimeReset" momba ny semicolon sy ny renivohitra voalohany.
Aza manahy fa tsy hisy hafatra na valiny hiseho, satria tsy hisy na inona na inona haseho fa haverina ny kaontera, izay no tianay hatao.
Moa ve misy amin'ireto fikafika ireto nanampy anao hanempotra kely kokoa raha toa ka mifanaraka ny fitaovana Kindle anao?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Tetika mahaliana 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Kindle anao
Horonantsary 3 segondra manidy iPhones na iPads
Famerenana Chuwi Hi10 Plus miaraka amin'ny klavie ivelany